Dood cilmiyeed ku saabsan hagaajinta waxbarshada Puntland oo ka furmay Garoowe iyo Bossaso. – Radio Daljir
Dood cilmiyeed ku saabsan hagaajinta waxbarshada Puntland oo ka furmay Garoowe iyo Bossaso.
Febraayo 25, 2012 12:00 b 0
Garowe, 25 -Wasaaradda waxbarshada ee dowladda Puntland ayaa maanta qabatay dood cilmiyeed looga arinayso horumarinta waxbarshada Puntland oo ay ka qaybqaadanyaan 45-qof oo laga soo xulay gobolada Nugaal,Mudug, Sool, iyo Ceyn.
Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarshada Puntland Maxamed C/wahaab Axmed ayaa ugu horayntii furay dood cilmiyeedka horumarinta waxbarshada Puntland,waxaana uu cadeeyey wasaaraddu inay usoo jeesatay horumarinta waxbarshada Puntland.
Waxaa uu tilmaamay horumarinta waxbarashada Puntland inaysan dabooli karin wasaaradda waxbarshada kaliya,balse loo baahanyahay inay si wadajir ah ay isaga kaashadaan macalimiinta, ardayda iyo shacabka guud ahaan.
Muhiimadda uu xambaarsanyahay dood cilmiyeedkan ayaa waxaa uu tilmaamay agaasimuhu in la tayeeyo hagaajinta waxbarshada Puntland,siyaasadda wasaaradda waxbarshada Puntland inay kala tashato dadwaynaha.
Cabdiraxmaan Maxamed Ducaalle oo ka mid ah masuuliyiinta wasaaradda waxbarshada ee Puntland ayaa isaguna furitaanka dood cilmiyeedka ka sheegay inay tahay wax lagu farxo in laga doodo siyaasadda waxbarshada Puntland ee sanadaha soo socda,iyadoona dib loo eegayo siyaasadihii wasaaradda waxbarshada ee xukuumadii uu hogaaminayay madaxwaynihii hore Gen.Cadde Muuse.
Dood cilmiyeedka maanta ay wasaaradda waxbarashada Puntland ku qabatay Garoowe iyo Boosaaso ayaa lafilayaa inay socdaan laba cisho,iyadoona ergada ka qaybagalysa ay isla meel dhigi doonaan 52-bog oo jaan goyn doona siyaasadda cusub ee wasaaradda waxbarshada Puntland.
Ugaaska cusub ee beesha Sadde oo ka codsaday shacabka Soomaaliyeed inay midoobaan